Rosia: Fanadihadiana momba ny fialan-tsasatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2018 22:03 GMT
Amin'izao fotoana izao, dia misy ny fanadihadiana mahaliana (RUS) tontosaina ao: momba ny fialantsasatra ao amin'ny Federasiona Rosiana.
Bilaogera am-polony vitsivitsy monja no namaly ireo fanontaniana valo tamin'ny fanadihadiana hatramin'izao, saingy 10 voalohany amin'ny laharana Yandex Blogs izany ankehitriny, ka mety hitombo ny isan'ireo hamaly.
Bilaogera 26 maniry “fialan-tsasatra mavitrika” – filasiana tsy matihanina, manao ski, sns. Bilaogera 20 mandeha any ambanivohitra – na ny dachas; bilaogera miisa 18 tsy te handeha lavitry ny trano fa aleony manao “tonotonon-kena (barbecue)” miaraka amin'ny namana; bilaogera 11 mandeha mankany amin'ny faritra an-dranomasina; ary bilaogera iray (mpampiasa LJ yasheruga) mandeha amin'ny fivahiniana masina.